Dowlada Kenya Oo Amaankeeda xoojisay kadib digniin Maraykanka ka soo yeertay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowlada Kenya Oo Amaankeeda xoojisay kadib digniin Maraykanka ka soo yeertay
31st January 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Wararka ka imaanaya wadanka Kenya aaya sheegaya in Ciidaamada Amaanka wadanka Kenya ay ku jiraan Feejignaan dheerad ah, iyagoo baaraya dhaamaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee isticmaala waadooyinka Magaalda Nairobi ee Xarunta wadanka Kenya.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamo aad u hubaysan oo badan la dhigay dhamaan goobaha Muhiimka ah ee ku yaala Magaalada Nairobi si looga gaashaanto weeraro ay Xarakada Shabaab ka fuliyaan gudaha wadanka Kenya sida kii Suuqa laga dukaamayso ee westage mall lagu qaaday oo kale .
Xoojinta Amaanka iyo feejignaanta dheeraadka ah ee lagaliyay Ciidaamda amaanka Kenya ayaa waxa ay daba socotaa Digniin ay dhawaan dowlada Maraykanku ka digtay weeraro argagaxiso oo la sheegay inDhaqdhaqaaqa Shabaab ay ka fuliyaan wadmadda ay Ciidaamada ka jogaan Soomaaliya sida Kenya, Uganda, Burundi, Ethiopia Sirilyaaloon, iyadoo Maraykanku ugu baaqday wadamadda Bariga africa in ay ka feejignadaan Weerarada Xarakada Shabaab ay qorshaynayaan in ay ka gaystaan wadamaddasi.
Gaafow oo beeniyay wararka sheegaya inuu xoog ku heysto dhul uusan laheyn
UN Special Representative for Somalia urges calm in Baidoa